Washbasin ivelany dia azo ampiharina tokoa! Fa raha tsy mitandrina ireo teboka 5 ireo ianao, korontana tsy tapaka avy eo!
Home / Blog / Washbasin ivelany dia azo ampiharina tokoa! Fa raha tsy mitandrina ireo teboka 5 ireo ianao, korontana tsy tapaka avy eo!
2021 / 04 / 06 FisokajianaBlog 731 0
Manao ahoana ny fahasarotana amin'ny tsy fananana trano fidiovana tokana ao an-trano? Ohatra, rehefa maraina ny andro, dia mila mankany amin'ny trano fidiovana izy, mila manasa ianao, tsy azo tanterahina miaraka amin'ny fotoana iray fotsiny! Ary ny famolavolana ny toeram-panasana ivelany, dia afaka mamaha ity olana ity amin'ny fomba mahomby, tsy ny fanatsarana ny fampiasana ny trano fidiovana ihany, fa ny fisarahana mando sy maina koa, ary tena sariaka amin'ny tokantrano kely ~
Ny famolavolana ny fanasana lamba dia ny famindrana ny koveta avy ao amin'ny trano fidiovana, ny trano fidiovana sy ny fandroana amin'ny faritra iray, ny fidiovana amin'ny faritra hafa, ny toerana roa dia tsy mifanelingelina, na dia tsy hitranga aza ny fampiasana fifandirana.
Fa kely ny toerana fidiovana, aorian'ny famindrana ny volo, afaka mampitombo ny faritry ny faritra lena ao anatiny, tsy dia tery loatra loatra intsony izao! Noho izany dia tena sariaka amin'ny tokantrano kely izy io.
Ankoatry ny fiantohana ny fisarahana mando sy maina ary fanamorana ny fampiasana azy, ny labozia dia madio sy madio kokoa ihany koa.
Raha tsy misy fisarahana mando sy maina, lamba famaohana, borosy nify ary kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro, dia ho ao anaty tontolo mando mandritra ny fotoana lava, mora hiteraka bakteria. Hesorina ny filentehana, tsy hisy olana toy izany, ny faritra ivelany dia maina kokoa noho ny trano fidiovana.
Ho fanampin'izay, rehefa manao filentehana ivelany, ireo olana manaraka dia tsy tokony horavana.
Tsy misy fantsom-pivoahana ivelan'ny trano fidiovana, mba hamahana ny olan'ny rano miakatra sy midina, mila misintona fantsona mitsangana mialoha ny tranobe ny fananganana.
Raha heverina fa tsy kely ny fanjifana rano dia tsy maintsy tantera-drano ny faritra ivelany! Ny rindrin'ny fantson-drano sy ny tany etsy ambany dia tokony hosorohana amin'ny alàlan'ny famonoana rano mba hisorohana ny fivoahan'ny rano mitarika amin'ny hamandoana sy ny bobongolo amin'ny rindrina.
Raha ny haben'ny soson-drano tsy misy rano kosa dia tsara kokoa ny mandoko ilay faritra avy amin'ny tany mivantana eo ambanin'ilay filentehana mankany 1.5m ambonin'ny haavon'ny rindrina ao anaty rano.
Ny rindrina dia asaina apetaho ny taila tsara, raha ny tena izy, raha ampitahaina amin'ny lokon'ny latex, ny temotra ary ny fitaovana hafa, ny fahaizan'ny tantera-drano vita amin'ny taila no tsara indrindra, misy rano mipetaka amin'ny famafana.
Toy ny rindrina, ny gorodona koa dia asaina mampiasa taila, raha te-hametraka gorodona hazo ianao, tadidio ny mametraka vato am-baravarana tsara eo akaikin'ny fantsakana, mba hahazoan'ny roa fitaovana ny vokan'ny fisarahana.
Ny vovo-drano dia tokony hatao eo amin'ny sakana amin'ny rano mba hisorohana ny rano eo ambonin'ny latabatra hijanona amin'ny tany, tsara kokoa ny manao eo alohan'ny sy aoriany, fa koa mba hisorohana ny rano tsy hipoka amin'ny rindrina amin'ny elanelam-baravarana. Aza mieritreritra fa tsy mandeha ny sakana amin'ny rano, ny vokatry ny fametrahana dia azo antoka fa tsara kokoa noho ny tsy apetraka!
Aorian'ny famoahana ny vilia fanasana, mety hahatsapa ianao fa tsy mitanjaka sy tsy mahasarika, ka raha misy toerana malalaka dia azonao atao ny manao partition handrakofana, toy ny vera mainty, ny fizara-bolo dia safidy tsara ~
Previous :: Ity ny efitrano fandroana, ny iray ao an-tranonao dia trano fidiovana fotsiny - fironana vaovao amin'ny famolavolana trano fidiovana amin'ny 2021 Next: 3 ㎡ ~ 8 ㎡ Volavola haingon-trano fandroana, fomba samy hafa amin'ny fanary anao
Ny "Sarobidy" amin'ny efitrano fandroana, mahavariana loatra, misy ny hevitra ...
Tsy mahalala misafidy kovetabe fandroana? Ireto maodely 31 manome anao aingam-panahy